Valve Anti-cheat: inona no tokony ho fantatrao momba izany ► Counter Strike 1.6 Download
Valve Anti-cheat: inona no tokony ho fantatrao momba izany?
Eny, fantatsika rehetra izany Counter-Strike 1.6 manana mpankafy an-tapitrisany eran-tany. Zava-dehibe ny milaza fa misy zava-misy maro, izay tsy maintsy ho fantatrao. Ary ny iray amin'izy ireo dia anti-cheat. Inona àry no tokony ho fantatrao momba izany? Aleo hiresaka bebe kokoa!
Ahoana no iantsoana ny fitaka ary inona no fanapahan-kevitra noraisin'i Valve?
Eny, fantatsika rehetra Counter-Strike tsy fialamboly mahafinaritra fotsiny ihany – indrisy fa toerana, izay misy mpilalao mamitaka ihany koa. Noho izany dia tsy tsara amin'ny mpilalao tompon'andraikitra izany. Zava-dehibe ny manamarika fa ny fisolokiana dia matetika antsoina hoe "hacking" amin'ny fanondroana programa na "hacks". Ary mazava ho azy, tsy sarotra ny manamarika izany Counter-Strike 1.6 anisan'ny lalao nisoloky ny mpilalao ihany koa. Eny, tsy tsara izany. Dia fanontaniana izany? Inona no atao hoe Valve? Nahita fanapahan-kevitra lehibe ity orinasa ity - nametraka rafitra manohitra ny fitaka izy ireo. Ary nantsoin'izy ireo hoe Valve Anti-Cheat (VAC).
Ary mazava ho azy fa tsy maintsy mamaly ny fanontaniana isika hoe: inona no tanjon'ity rafitra ity? Noho izany, vaovao tsara ho an'ny mpilalao tompon'andraikitra izany - ny kaontin'ny mpilalao misoloky dia mety ho voarara tanteraka amin'ny mpizara voaaro VAC rehetra.
Nisy dikan-teny vitsivitsy momba ny VAC
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny milaza fa nisy dikan-teny vitsivitsy amin'ny VAC. Ary mazava ho azy, zava-dehibe ny miresaka momba ny fomba fiasa. Ohatra, raha hiresaka momba ny dikan-teny voalohany amin'ny VAC isika, dia tokony holazaina fa nisy fandrarana saika avy hatrany taorian'ny nahitana azy. Ary tsy vaovao rehetra izany - zava-dehibe koa ny manamarika fa tsy maintsy niandry roa taona ny mpisoloky vao tsy voarara ny kaonty. Eny, tena ela be izany, ka manam-potoana be hieritreretana ny ataony ilay mpisoloky. Tena fomba tsara hialana amin'ny fitaka izany.
Misy ny dikan-teny faharoa amin'ny VAC. Saingy eto dia tsy manana vaovao tsara ho an'ny mpilalao tompon'andraikitra izahay, satria amin'ity dikan-teny ity dia tsy voarara ho azy ny mpisoloky. Noho izany, amin'ity dikan-teny ity, ny orinasa dia nametraka ny politikan'ny 'fandrarana tara. Noho izany, miaraka amin'ity fanapahan-kevitra ity, manantena i Valve fa hamantatra sy handrara ireo mpamitaka betsaka araka izay azo atao.
Mazava ho azy fa zava-dehibe ny mahatsikaritra fa toy ny rafitra fitsikilovana rindrambaiko rehetra, ny fitaka sasany dia tsy hitan'ny VAC.
Noho izany, fantatsika rehetra fa tena ratsy ny fitaka… Tena ratsy amin'ny mpilalao tompon'andraikitra izany. Noho izany, menatra ianao, raha misoloky. Aza mpisandoka. Saingy tsy izany ihany - faly izahay satria ny orinasan'ny Valve dia nahita fanapahan-kevitra mahagaga ho an'ny mpisoloky - ity orinasa ity dia namorona rafitra manohitra ny fitaka antsoina hoe Valve Anti-Cheat (VAC). Ity rafitra ity dia manana dikan-teny vitsivitsy, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manana tanjona mba hisorohana ny fisolokiana amin'ity lalao ity. Noho izany, tena faly izahay fa orinasa tena tompon'andraikitra i Valve. Saingy tsy izay ihany – tianay ho tsaroana indray, fa tena ratsy ny fisolokiana, ka aza manao izao fotsiny ianao. Noho izany, aoka ianao ho tompon'andraikitra amin'ny tenanao sy ny mpilalao hafa - aza mamitaka, milalao amin'ny fomba mazava.
Nanomana lahatsoratra hafa ho anao koa izahay, raha liana amin'ny fampandrosoana CS ianao dia azonao vakiana eto: Development Counter-Strike 1.6
Tagsanti cheat valve counter strike 1.6 counter strike 1.6 manohitra ny fitaka counter strike 1.6 Download counter strike 1.6 valve-anticheat cs 1.6 cs 1.6 manohitra ny fitaka cs 1.6 Download hack anticheat anti-fitaka rollers inona no atao hoe anticheat valve